နံနက်စာသောက်စရာအသစ် - Mountain Dew? | Martech Zone
နံနက်စာသောက်စရာအသစ် - Mountain Dew?
ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 14, 2005 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2014 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ခွင်သို့ရေဒီယိုနားထောင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းသောအချိန်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ယာဉ်အသွားအလာဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောခရီးသည်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု? ပြproblemနာမရှိဘူး၊ ငါ့ရဲ့ DJs တွေကငါ့ကိုဆွဲခေါ်ပြီးနေ့ကစပြီးညာဘက်ကိုစလိမ့်မယ်။
ငါစဉ်းစားမရပ်နိုင်။ ရေဒီယိုမှာကော်ဖီအရသာမကြိုက်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းကောင်းတဲ့ကြော်ငြာကိုငါနားထောင်နေတယ်။ အခြားရွေးချယ်စရာ - Mountain Dew ။ တောင်ထူထပ် Mountain Dew! ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကဘာကြောင့်အဆီတွေများနေလဲ။ အခုဆိုရင်မနက်စာအတွက်ပူဖောင်းသကြားဘူးခွံတွေကိုမနက်စာအတွက်ကြော်ငြာပါတယ်။ ငါတို့နို့ကိုနို့နဲ့ငါတို့အစားထိုးနိုင်တယ်။
ပွင့်လင်း = ကြီးထွားမှု
14:2005 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 58
ဒါတွေအားလုံးက ငါ့ယောက်ျားရဲ့ "အစာအိမ်ဝေစု" နဲ့ ပတ်သက်တယ်။
10:2005 pm တွင်အောက်တိုဘာ 3, 10
Mc-Griddle အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကို နှစ်သက်သူတစ်ဦးထံမှ ဆင်းသက်လာသည်...
နိုဝင်ဘာလ 20 ရက် 2009 ခုနှစ် ညနေ 2:54 နာရီ
ဒီကောင် Mc donald အစားအစာစားပြီး တောင်နှင်းရည်ကို ကိုက်နေတာလား။ DDDEEERRRPPP